fitoeram-bary fitoeram-bola aluminium aluminium tafo-kofehy manao famokarana milina INDONESIA
Malagasy fitoeram-bary fitoeram-bola aluminium aluminium tafo-kofehy manao famokarana milina INDONESIA
Ahosotra tarehy 800 metatra vita amin'ny alim-bary misy kofehy tsara tarehy sy loko maitso. Ny ankamaroany dia ampiasaina amin'ny zaridaina, orinasa, toeram-ponenana, trano fandraisam-bahiny, trano fampirantiana, vakansy, fananganana tranainy sy trano maoderina.
800 ny alikaola vita amin'ny rindrina vita amin'ny alim-borona vita mivantana indrindra any Indonezia. Tian'izy ireo ny rindrina alim-borona vita amin'ny alim-borona ho an'ny trano fonenana.
Volamena alaina miisa 800 alohan'ny hidirany dia 914mm ny volom-borona, ampiasaina amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovam-piadiana amin'ny alàlan'ny vy ny PPGI. Ary aorian'ny famolavolana ny famokarana dia ny width width common is 800mm.
Ny takelaka vita amin'ny alimina feno 800 vita tamin'ny alim-bary vita amin'ny milina dia ahitana ny decoiler, milina fanaovana milina, rafitra fanaraha-maso ny ordinatera, puncher amin'ny aterineto ary ny latabatra.
Ny Customized dia raisina, raha tsy mahita ny vokatra ilaina ao amin'ny tranonkalanay ianao, azafady mba asehoy ahy ny ilainao fanosehana, eto dia manamboatra ny ekipa dia hanapaka ary hanome anao valiny mahafinaritra.